Fa maninona no Pedro Regis? - Countdown ho an'ny Fanjakana
Amin'ny hafatra 4921 voalaza fa voarain'i Pedro Regis nanomboka tamin'ny 1987, ny vatan'ny fitaovana mifandraika amin'ny fisehoan'ny Our Lady of Anguera any Brezila dia tena goavana. Nahasarika ny sain'ny mpanoratra manokana toy ny Saverio Gaeta mpanao gazety malaza, ary izy io dia nanjary lohahevitra natao tamin'ny fandinihana boky nahaterahan'i Annarita Magri. Raha jerena aloha dia mety ho hita miverimberina ny hafatra (fiampangana matetika ao amin'ireo Medjugorje) amin'ny resaka fiantohana hatrany ny lohahevitra afovoany: ny filàna manokan-tena tanteraka amin'Andriamanitra, mahatoky amin'ny tena Magisterium an'ny Fiangonana, ny lanjan'ny vavaka, ny Soratra Masina ary ny Eokaristia. Na izany aza, rehefa dinihina mandritra ny fotoana maharitra kokoa, ny hafatra Anguera dia mikasika ny lohahevitra isan-karazany izay tsy mifanaraka amin'ny fampianaran'ny Fiangonana na fanambarana ankatoavina manokana.
Hafatra avy amin'i Pedro Regis
Pedro - Rehefa toa very daholo dia ho avy ny fandresena
Aza adino: eo am-pelatananao ny Holy Rosary sy ny soratra masina.
Pedro - Hahafoy ny lalàn'Andriamanitra ny olona
... ary andevo amin'ny lamina vaovao.
Pedro - Fako fotopampianarana diso
Betsaka ireo voafidy hiaro no ho voafitaka.
Pedro - Ilay fanenjehana lehibe
Hiparitaka hatraiza hatraiza ny fotaka fotopampianarana diso.
Pedro - Rehefa lavo ny rindrina
Handroso ny fahavalo ary hiteraka fahavoazana lehibe ao amin'ny tranon'Andriamanitra.
Pedro - Ady Lehibe
Ny fiadianao miaro ny fahamarinana.
Izany no mahatonga ny fijaliana.
Pedro - Lohan'ady
Mijanona miaraka amin'i Jesosy.
Pedro Regis - Lazao amin'ny rehetra fa maika Andriamanitra
Aza avela ho rahampitso izay tokony hataonao.
Pedro Regis: aorian'ny fahoriana dia handresy ny fiangonana
Ny olombelona dia nanjary voaloton'ny ota ary mila sitrana.
Pedro Regis - Ny tahotrao dia fanelingelenana ataon'ny mpanohitra ahy
Tsy misy olona afaka manao zavatra manohitra anao raha mametraka ny fitokisanao sy ny fanantenanao ao amin'ny Tompo ianao.
Pedro Regis - Ny drafitry ny fahavalon'Andriamanitra dia ny handrava ny masina
Aforeto am-bavaka ny lohalinao ary ho afaka hizaka ny lanjan'ny fisedrana ho avy ianao.
Pedro Regis: Omeo ny tsara indrindra ho anao ao amin'ny misiona
Manomeza anjara amin'ny fandresena azo avy amin'ny foko tsy masiaka
Pedro Regis - Mijoroa ho vavolombelona amin'ireo zava-mahatalanjon'ny Tompo
Pedro Regis - Hivondrona ireo mpamadika ny finoana
Horoahina ireo mpiaro ny tena Magisterium.
Pedro Regis - Marary ny olombelona ary mila fanasitranana
Pedro Regis: hatanjaho amin'ny tenanareo amin'ny filazantsara
Pedro Regis - Mivavaha Tsara Alohan'ny Hazo fijaliana
Mavesatra ho an'ireo izay mino.
Pedro Regis - Fitsapana nandritra ny taona maro
Pedro Regis - Torio Jesosy na aiza na aiza
Pedro Regis - Ho hita amin'ny toerana vitsivitsy ny marina
Pedro Regis - Ny Voninahitr'ity Pass World ity
Pedro Regis - Ho voaro ireo natokana ho ahy
Ilaiko ny "Eny" tso-po sy be herim-po anananao.
Pedro Regis: Maro no ho voaloton'ny fampianarana sandoka
Ny devoly dia hanao izay hiaro anao amin'ny fahamarinana.
Pedro Regis - Hisy fanenjehana lehibe
Pedro Regis - ny setroky ny devoly
Ny olombelona dia mandehandeha amin'ny lalan'ny fandringanana.
Pedro Regis - Lanitra Vaovao, Tany Vaovao
Aorian'ireo fanaintainana rehetra ireo dia hamafa ny ranonao ny Tompo.
Pedro Regis - Tsy handao anao i Jesosy
Pedro Regis - Arovy ny Eokaristia
Pedro Regis - Misafotofoto be
Pedro Regis - Miaro ny marina hatrany
Pedro Regis - Arovy ny Harena Sarobidy
Pedro Regis: Betsaka no ho very amin'ny finoana
Pedro Regis: Betsaka no ho voafitaka
Pedro Regis - ady lehibe no tonga
Henjehina mafy ny Fiangonana.
Pedro Regis - Tiavo ary miarova ny marina
Hisy ny tsy fahatomombanana ao ...
Pedro Regis - Tonga ny tafio-drivotra lehibe
Mijanona ho mahatoky ... Tsy ho voatarika ho amin'ny fotaka fampianaran-diso ianao.
Pedro Regis - Mivavaka, mivavaka, mivavaka
Miaina mankamin'ny lavaka mangitsokitsoka ny famononam-tena izay nomanin'ny lehilahy amin'ny tanany ny olombelona.
Pedro Regis - Misy zavatra mahatalanjona tonga
Betsaka no hihozongozona ny finoany.
Pedro Regis - Miseho ho tsara ireo fahavalo
Jesosy no hany tokana alehanao.
Pedro Regis - Momba ny vavaka sy ny afofandiovana
Aza mifanalavitra amin'izay rehetra manakana anao an'i Jesosy.
Pedro Regis - Ho avy ny tadio mahery
Mankany amin'ny fahoriana lehibe ianao.
Pedro Regis - andinin-tsoratra masina rosary sy masina
Atolory ahy ny tananao ary hitarika anao mankany amin'i Jesôsy aho.
Pedro Regis - Tazomy tsara ny finoanao
Aoka ny tenanao no ho tarihin'ny fahazavan'ny Tompo.
Pedro Regis - Mandrosoa amin'ny fiarovana ny fahamarinana
Ireo fahavalo dia hanary ireo fahamarinana lehibe amin'ny finoana.
Pedro Regis - Tiavo ary miaro ny marina
Miala any amin'izao tontolo izao mba tsy ho andevozin'ny devoly.
Pedro Regis - Matokia an'i Jesosy
Izy no Ilay Fahazavana manazava ny fiainanao ...
Pedro Regis - Fanomezana lehibe indrindra
Ny fanafihana lehibe indrindra dia hanoherana ny Fisoronana sy ny Eokaristia.
Pedro Regis - Tazomy hatrany ny afon'ny finoana
Ataovy velona hovelomina ny lelan'ny finoana ...
Pedro Regis - Mifampahereza
Mifampahery sy mijoroa ho vavolombelona amin'ny fanatrehako eo aminareo.
Pedro Regis - Henoy aho
Pedro Regis - Tandremo
Tsy te-hanery anao aho fa andraho tsara.
Pedro Regis: ny aizina manarona ny tany manontolo
Te hanao anao ho olomasina aho ho voninahitry ny fanjakan'Andriamanitra. Sokafy ny fonao! Tsy ho ela ...
Pedro Regis - Hihozongozona ny tany
Jesosy ho: Ny maha-olombelona dia mizotra mankany amin'ny ho avy mampalahelo. Hihorohoro ny tany ary hiseho ny lavaka tsy hita noanoa. Ry zanako mahantra ...
Pedro Regis - aretina ao amin'ny fiangonana
Ilay Andriambavin'ny Fiadanan'ny Fandriampahalemana, 1 Janoary 2020: Ry zanako malala, izaho no Mpanjakavavin'ny fandriampahalemana ary manana ...
← Fa maninona i Simona sy i Angela?
Maninona ireo mpahita fahitan'ny… →